Sky Angkor Airlines dia misafidy an'i Saber
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Sky Angkor Airlines dia misafidy an'i Saber
Saber dia nanambara fifanarahana fizarana votoaty vaovao miaraka amin'ny Sky Angkor Airlines ho mpiara-miasa amin'ny rafitra fizarana manerantany (GDS) hahatratra ireo mpiasan'ny dia manerantany.
Ny minisiteran'ny fizahan-tany any Kambodza dia naminavina ny fitomboan'ny mpizahatany 10 isan-jato amin'ity taona ity, ary mikasa ny hanitatra miandalana manerana an'i Azia atsimo atsinanana ny seranam-piaramanidina any Kambodza mba handraisana ny fiakaran'ny mpandeha, indrindra ny avy any Shina. Ny fifanarahana tamin'i Saber dia zava-dehibe ho an'ny mpitatitra satria manitatra ny asany ary mikendry ny hanatsara ny fahitana amin'ny tsena vaovao. Saber dia mitondra lanja lehibe amin'ny Sky Angkor Airlines amin'ny alàlan'ny fanomezana ny mpitantana fidirana amin'ny tsenambarotra fitetezam-paritany manerantany, ahafahana mifandray amin'ny tsena lehibe ao amin'ny faritr'i Asia Pacific ary manohana ny filany fanaparitahana manerantany.
“Saber no mpiara-miombon'antoka tonga lafatra hanohanana ny tanjon'ny fitomboantsika, na ao anatiny na any ivelan'i Kambôdza. Amin'ny alàlan'ny fanaparitahana atiny vaovao azo hamandrihana ao amin'ny sehatr'i Saber, dia ho hitan'ny mpiasan'ny dia mihoatra ny 425,000 mifandray amin'i Saber eran'izao tontolo izao, ”hoy i Mak Rady, CEO, Sky Angkor Airlines.
"Amin'ny maha mpiara-miasa tian'izy ireo hahatratra ireo mpiasan'ny dia manerana an'izao tontolo izao, dia faly izahay manolotra an'i Sky Angkor ny tanjaky ny tsenan'ny dia manerantany momba an'i Sabre sy ny sakan'ny vahaolana vaovaonay", hoy i Rakesh Narayanan, filoha lefitry ny kaompaniam-pitaterana, Saber Travel Network the Asia Pacific .
"Seychelles SMART", mahazo mpanaraka dimy hafa avy any La Réunion